All 2009 Professional Antiviruses Security and Firewall & Utilities - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
All 2009 Professional Antiviruses Security and Firewall & Utilities
AVAST INTERNET SECURITY 4.8.1.1299 2009
AVIRA ANTIVIR PREMIUM SUITE 8.2.0.370 2009
ESET NOD32 BUSINESS PRO EDITION 3.0.672 2009
အားလုံးအသစ်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲရနိုင်အောင်လို့ပါ- လင့်တွေ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ-
ဒါပြီးရင် ဒီသရက်အောက်မှာဘဲUtilities တွေ ထပ်တင်ပေးပါမယ်။
Last edited by Aung Aung; 04-10-2009 at 04:39 PM.. Reason: replace link
အောက်ပါအသင်းဝင် 70 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစိန်လေး, ကိုပျင်း, ကိုသားကြီး, ကိုမောင်၁၈၅, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကနေဒီ, ခင်မောင်ထွန်း, ချစ်သားငယ်လေး, စစ်တွေသားချေ, ဇရက်, ညီခဝေ, နိုင်လင်းစိုး, ဖန်ဆင်းရှင်, ရန်မျိုးအောင်, လုလု, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သိဘူး, အယ်သား, စောစံဖြိုး, ဇော်ရဲပိုင်, ဇော်ဇော်, တေဇာထွန်း, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အေးချမ်း, ရွှေကိုင်းသား, သောကမဲ့မိုးတိမ်, အောင်ထက်ကျော်, အောင်လံလေး, အောင်ကျော်ဆန်း, ဝေယံ, ဖြူဖွေး, နိုးတူး, athinmoe85, Aung Aung, aung myint, aungbanthar, blackNwhite, bonge, chit moe oo, Desert Fox, Emc Arkar, ferd, Gateway, joe1111980, ko myo, kohtet4you, kyawkyi123, KznT, linthuraaung, Lwin Thu, maJunior, mercury, minwinkhaing, myozaw, naingthu, phyomyintthein, phyothuhein, smlat88, tapaung, tartarlay18, tu tu, Venom, wahgyi, zmhtut, zo, ^Dragon^
ပြန်စာ - All 2009 Professional Antiviruses Security and Firewall & Utilities
Close Hacker Doors alias Windows Worm Doors Cleaner
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစိန်လေး, ကိုသားကြီး, ညီခဝေ, နိုင်လင်းစိုး, ဖန်ဆင်းရှင်, မနက်ဖြန်, လုလု, လူမုန်း, မောင်သံသရာ, အောင်ထက်ကျော်, အောင်လံလေး, 07demon, amaung344, athinmoe85, blackNwhite, Gateway, joe1111980, ko myo, KznT, Lwin Thu, maJunior, thulay2, wahgyi, zmhtut, zo
ကိုရီအောင်ရေ.....kaspersky internet scurity ဆော့ဝဲလ် ကိုတော့တင်ပြီးသွားပါပြီဗျာ.....သူအတွက် blacklist မဖြစ်တဲ့ကီးလေးများရှိရင် မစပါနော်......ပို့စ်တွေမှာတော့တွေပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတာမရလို့.......blacklist လို့ပြရင်ပြမပြရင်ဘာတွေလဲမသိဘူးပြနေတယ်...ဟဲဟဲ....သေချာမဖတ်ထားမိလို့ပါနော်.......အဲဒါလေးကူညီပါနော်.....စက်ဗိုင်းရက်တောင်ကိုက်နေပြီ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မနက်ဖြန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Gateway, Lwin Thu
မနက်ဖြန်ရေ-- ကီးတွေ တော်တော်များများခု ဘလက်လစ်ဖြစ်နေတယ်။ အကိုတောင် ကက်စ်ပါစကီးကိုမသုံးတော့ဘူး။ အခုလောလောဆယ် အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေအောင် NOD 32 ကိုတင်ပေးလိုက် တယ်။ ပြောင်းသုံးချင်သူများသုံးပါ။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းပါ-
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မောင်ထွန်း, ဂျာဂျာ, စစ်တွေသားချေ, ဇရက်, ဇာနည်မောင်, ညီခဝေ, လူမုန်း, မောင်သံသရာ, ရွှေကိုင်းသား, သောကမဲ့မိုးတိမ်, အောင်ထက်ကျော်, amaung344, athinmoe85, aungbanthar, blackNwhite, junemoe, Lwin Thu, maJunior, naingthu, phoetharlay
ကိုရဲအောင်တင်ပြပေးတဲ့ Avast ဖိုင်ထဲကကီးဂျန်လေးကို ကျွန်တော့စက်က NOD32 က ဗိုင်းရပ်ဆိုပြီးသတ်လိုက်တယ်..Avast တင်ထားတဲ့ စက်မှာ တင်ကြည့်တော့လဲ
ဗိုင်းရပ်ဆိုပြီး သတ်လိုက်တယ်..အဲဒါ..နောက်ထပ် avast ကီးအသစ်ရှိရင် .လိုချင်ပါတယ်..
မဂျူနီယာရေ- ဒီ serial keys လေးတွေကိုလဲ စမ်းကြည့်ပါအုံး ။
NOD32 အတွက် username and password တို့အား Update လိုချင်ကြရင်ဖြင့် - အောက်က ဆိုက်တွေမှာသွားရောက်ယူနိုင်ပါကြောင်း
လူမုန်း, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်သံသရာ, blackNwhite, Lwin Thu, Moe Lay, tu tu, zo
19-06-2009, 11:09 PM
vast! Antivirus 4.8.1296 Pro FULL + KEY
နောက်ဆုံး Full Version ပါ Keygen လေးပါ ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ-
Last edited by tu tu; 27-03-2010 at 06:27 PM..
မောင်သံသရာ, ရွှေကိုင်းသား, amaung344, athinmoe85, blackNwhite, nyinyi mt, phoetharlay
19-06-2009, 11:32 PM
AVG Antivirus Pro 8.5.287 [Valid till year 2018]
Credit to (www.cyberwarez.info)
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နိုင်လင်းစိုး, မောင်သံသရာ, amaung344, athinmoe85, blackNwhite, Gateway
Panda Global Protection 2009 Incl Serial
*Safe Internet Browsing
Last edited by ညီနေမင်း; 23-06-2009 at 09:38 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မောင်သံသရာ, amaung344, blackNwhite, Gateway
23-06-2009, 09:41 AM
ချစ်သားငယ်လေး, မောင်သံသရာ, blackNwhite, Gateway
23-06-2009, 09:43 AM
မရှာတတ်တဲ့သူတွေ ဒီပို့စ်ကိုရောက်လာရင် တစ်လက်စတည်းရသွားအောင် Kaspersky AntiVirus 2009 ကိုပါတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ...
ချစ်သားငယ်လေး, ဇရက်, ဇီးရိုး, မောင်သံသရာ, ရွှေကိုင်းသား, blackNwhite, Gateway, ko myo, nyinyi mt
29-06-2009, 12:40 AM
ပို့စ်9ခုအတွက် 23 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့်ဆီက rapidshare ကနေ ဒေါင်းလို့မလွယ်လို့အကို
kaspersky2009 ကို တစ်ခြားလင့်က ပြန်တင်ပေးပါ့လား
ifle ပဲဖြစ်ဖြစ် mediafire ပဲဖြစ်ဖြစ်အကို
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇီးရိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇီးရိုး
29-06-2009, 01:55 AM
ကိုညီနေမင်း တင်ထားတဲ့ file ကိုဘဲကျနော် link ပြန်ခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Last edited by ko myo; 29-06-2009 at 05:57 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ko myo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇီးရိုး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အေးဇော်ဆွေ, Aung Aung, blackNwhite, junemoe, mercury, MIN HLA PHONE, tu tu
Norton 360 isacomprehensive consumer security solution that offersafull circle of protection and eliminates the need to purchase and manage multiple products. It defends your PC againstabroad range of threats, safeguards against online identity theft, protects important files from loss, keeps your PC tuned up for peak performance, providesahassle-free user experience, protects against the latest online threats.
Download Norton 360 3.0 Rapidshare
Last edited by ညီနေမင်း; 11-07-2009 at 02:23 PM..
သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, blackNwhite
17-07-2009, 05:28 AM
28-07-2009, 11:47 AM
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 64 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Norton 360 3.0
rapidshare ကြီးက Download မရဘူးဖြစ်နေလို့ တခြား uploader လေးနဲ့တင်ပေးပါလားဗျာ။
Norton က အရမ်းကောင်းတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောလို့ဗျာ။ ကျွန်တော်စက်မှာ Macfee တင်ထားတာ စက်ကအရမ်းလေးနေလို့ Norton ပြောင်းတင်ချင်လို့ပါ။
Last edited by tu tu; 18-08-2009 at 05:56 AM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Annku အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Annku
20-08-2009, 06:36 PM
Eset nod32 business pro edition 3.0.672 2009 က ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ မရဘူး။ ပြန်တင်ပေးပါလား ကူညီပါနော်။
Find More Posts by ပုလဲဖြူ
ပို့စ် နံပါတ် ၁ က Eset NOD 32 အတွက် အရင် ifile လင့်နေရာမှာ mediafire link ပြန်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ပြောပါခင်ဗျ။
Last edited by Aung Aung; 20-08-2009 at 07:22 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပုလဲဖြူ, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, tu tu
ကိုရဲအောင်တင်ထားတဲ့ avg ဗိုင်းရပ်လင့်လေးက ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲလို့ မရတော့ပါဘူးခင်ဗျား
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by moeyetkh
ပိုဒ့်နံပါတ် ၈ က ကိုရဲအောင် တင်ထားတဲ့ AVG ဆိုရင် ဒေါင်းလော့ရနေပါသေးတယ်။ ifile ကဆာဇာကြောင်နေတာကြောင့်ပါ။ အခုကောင်းသွားပါပြီ။
မောင်သံသရာ, nyinyi mt
Microsoft က September 29 တွင် Official ထုတ်လိုက်တဲ့ Freeware Antivirus လေးပါ ။ CPU နဲ့ Memory Usage တွေကို Limit လုပ်ထားနိုင်မယ့် Function မျိုးတွေလဲ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
Microsoft Security Essentials will be available for -
SP3 32Bit or 64Bit
အဲ .. ဒါလေးတော့ သတိထားပေါ့ဗျာ ။
Last edited by Computer; 30-09-2009 at 11:51 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Computer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 18 ခုအတွက် 62 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Bit Defender လေးလိုချင်လို့ပါ၊ part-1 ချပြီးပါပြီ၊ part-2 ကျမှ no such file ဆိုပြီး ပြနေလို့... ချပြီးသားလူများရှိရင် ပြန်တင်ပေးကြပါလားခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ sismin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by sismin
Bit Defender total security 2009 က ကိုရဲအောင်တင်ထားတဲ့ဖိုင်တော့ မဒေါင်းထားလို့ မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော် မီဒိယာဖိုင်းယားလင့် တခု နဲ့ ပြန်အစားထိုးထားပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ပြောပါခင်ဗျ။
Last edited by Aung Aung; 04-10-2009 at 04:41 PM..
မောင်သံသရာ, sismin, tu tu
Avria antivirus security suite + working key
AVG antivirus professional v 9.0.700+ keygen
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ amaung344 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Bitdefenter Antivirus +SN
BDAV 2010(108.7 MB) အိုင်ဖိုင်နဲ့ပါ။
ဒါက Bitdefender ၂၀၁၀ အားလုံးအတွက် Patch.
Bitdefender Internet security 2010(32+64 bit)+ Keys
ဟိန်းသူအောင်, မောင်သံသရာ, Desert Fox
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 49 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Last edited by tu tu; 23-11-2009 at 05:39 PM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zinwinhtike01 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by zinwinhtike01
ပို့စ် 106 ခုအတွက် 356 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကို virus software က အင်တာနက်ရှိမှသုံးလို့ရတာလားခင်ဗျ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဟိန်းသူအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဟိန်းသူအောင်
PC Tool Internet Security Suite 2009 6.0.0.362 PyaitSone Applications215-12-2011 06:45 PM
Zone Alarm Antivirus & Internet Security Ye Naung Applications 13 17-11-2009 01:19 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 07:56 AM